Shina ambongadiny ankizy akanjo ba misy volo sy pataloha mpanamboatra lamba mpanamboatra pullover sy mpanamboatra | Fahitana
akanjo ba ambongadiny ankizy manafosafo pullover hoodie
Kitapo paosy kangaroo
Satroka roa nilahatra
Mafana sy lamaody
Ity hoodie mahatsiaro tontolo iainana ity dia mampiasa fitaovana volon'ondry ahazoana aina mba hamoronana lamba mifangaro lanjany. Miaraka amin'ny habe marobe, io no lalao mety indrindra ho an'ny vondrona lehibe maniry ny hampihena ny fanontana ny tongotr'izy ireo.
Ho an'ny fanontana ho an'ny ankizy manokana, manaingo ny hoodies zanakao miaraka amina lahatsoratra, sary na endrika amam-panaonay. Loko 30 mihoatra ny tahiry azo. Fanontana vita haingana sy tsara kalitao ho an'ny fanomezana manokana anao manokana.
Teo aloha: ambongadiny gym fitness custom print microfiber marathon fanatanjahan-tena golf manokana amoron-dranomasina lamba famaohana lamba famaohana
Manaraka: zaza amam-panahy fanao zaza kilalao paosy landy lobaka polo
Pullover Hoodie avo lenta